Ny lahatsoratr'i Suzi Shapiro momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Suzi Shapiro
Suzi Shapiro dia nandany nandritra ny androm-piainany ny fianarana momba ny fomba fiasan'ny olona sy ny fomba fampiasana an'ity vaovao ity hanatsarana ny fiainany. Suzi dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny maha-mpampianatra oniversite Psychology and Informatics azy ary mpikaroka ny traikefa amin'ny mpampiasa ary niara-niasa tamin'ny olona avy amina orinasa maro isan-karazany, nanomboka tamin'ny Teknika ka hatramin'ny ara-bola ka hatramin'ny ara-pahasalamana hatramin'ny fanabeazana. Suzi dia mpanolo-tsaina momba ny traikefa amin'ny mpampiasa GravityDrive. Ny fomban'izy ireo amin'ny famolavolana ny traikefa amin'ny mpampiasa dia afaka manatsara ny fizotrany, ny serivisy ary ny vokatra. Izy koa dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana fiofanana ho an'ireo olona te hanatsara ny fizotran'ny Experience Experience amin'ny mpampiasa azy ireo.